Ukubuyekeza: isonto ngeFirefox OS | Kusuka kuLinux
I-AurosZx | | Aplicaciones, Kunconyiwe
Ngemuva kokufika eSpain nasePoland, I-Firefox OS ufikile lapha eVenezuela (vele iColombia) ne-opharetha I-Movistar.
Ngisebenzise ithuba lokuthi umama wayefuna ukuvuselela endala Nokia 2118, ngoba ngiyazenzela (noma usenze, hehe) nge Alcatel One Touch Umlilo. Futhi namhlanje, ngemuva kweviki lokusetshenziswa, ngiza ukubhala okuncane ngokwenzekayo I-Firefox OS.
Yize kukho konke ukubuyekeza ngiqhathanisa iFirefox OS ne-Android ne-iOS, okungamanye amapulatifomu enginawo futhi enginikeza umbono wami, akuvumelekile ngokuphelele ukuwaqhathanisa ngenxa yesigaba sokuqala sentuthuko lapho kutholakala khona iFirefox OS.
Kulungile iqembu enginalo yilo Alcatel One Touch Umlilo, ihadiwe enesizotha. Kungaba ngcono kakhulu ukuthi I-Geeksphone Keon (ifoni yokuthuthukisa esemthethweni) uma ufuna ukuphela okuphansi, kepha lokhu kufeza injongo kahle kakhulu.
I-CPU: I-Qualcomm Snapdragon MSM7227A (Cortex-A5) @ 1GHz
I-GPU: I-Adreno 200 (ithuthukisiwe)
Imemori ye-ROM / RAM: 512MB (160MB yezinhlelo zokusebenza), 256MB
Isikrini: TFT 3.5 ″, isinqumo 320 × 480
Ukuxhumana: I-Wi-Fi, i-Bluetooth, i-GPS, i-3G
Izinzwa: Ukusondela, Ukukhanyisa, Ukuzungelezisa
El Umlilo we-OT Kufakwa iprosesa ejwayelekile esezingeni eliphansi, esetshenziswa kwamanye amadivayisi afana ne- I-LG Optimus L5 noma i I-Sony Xperia J, Nombhali wakhe GPU.
Noma ngubani angasho ukuthi ufushane kwimemori, kepha I-Firefox OS ayidingi inkumbulo engaka (zombili iROM ne-RAM) ukuze isebenze kahle. Isikrini sinekhwalithi eyamukelekayo, futhi ukuxhumana nezinzwa ubuncane obudingekayo I-Firefox OS.
1 IFirefox OS? Kuyadliwa lokho?
2 Izimpungushe zomlilo, ama-android aluhlaza, namaphengwini kubonakala sengathi bayezwana
3 Isakhiwo sohlelo
4 Umbono wokuqala ubalulekile
5 Ukubukeka: nobuhle noma isilwane
6 Ulayini ophakathi kwewebhu nezinhlelo zokusebenza ezihlanganisiwe
7 Ukusesha okunamandla: ukuhlakanipha ngamandla
9 Ukugenca nokwenza ngezifiso: ukufinyelela kuGaia
10 Ukuphepha nobumfihlo
IFirefox OS? Kuyadliwa lokho?
Okwalabo abangaqapheli kakhulu, I-Firefox OS (ekuqaleni ibizwa nge-B2G noma iBoot 2 Gecko) wazalwa ngesinyathelo se I-Mozilla y Telefónica ukwakha uhlelo lokusebenza lweselula ngokuya ngobuchwepheshe bewebhu. Inhloso bekuwukwenza kube nohlelo oluvulekile, olungasindi, olunamanzi nolunjiniyela.
Cishe ngemuva konyaka nengxenye yentuthuko, futhi sesedlule kumadivayisi wokuhlola ambalwa, yakhishwa ngamadivayisi amabili okuqala okuhweba: I-ZTE Vula y Alcatel One Touch Umlilo. Lokhu kuza nenguqulo 1.0.1 de I-FxOS, yize inguqulo yakamuva ezinzile ingu- 1.1.0 (iyatholakala manje kumadivayisi wokuhlola, ezentengiso ekupheleni konyaka) kanye 1.2.0 kuyathuthuka.
Izimpungushe zomlilo, ama-android aluhlaza, namaphengwini kubonakala sengathi bayezwana
Ijubane lapho inguqulo yokuqala ye- I-FxOS kungenxa yokuthile okubaluleke kakhulu: uKI-ernel Linux inguqulo kuncishisiwe kusuka ku-Kernel Linux kusuka ku-Android.
Futhi uma ngisho lokhu, kungenxa yokuthi empeleni kusekelwe kufayela le- version 3.0 I-Kernel iyahambisana ne- I-Android ICS, noma ngaphezulu, ibuye ihambisane nabashayeli baleyo nguqulo.
Lokho wukuthi, kusekelwe I-Android 4.0, iyahambisana ne- Ukusheshisa kwe-GPU nabo bonke abashayeli / amamojula aleyo nguqulo (njenge-Swap noma i-zRAM).
Eqinisweni, uma unolwazi oludingekayo nabashayeli, kungenzeka imbobo Firefox OS kumadivayisi aletha Android (futhi okuphambene nalokho).
Kokufana okunamandla kakhulu Nexus 4 o I-Galaxy S2, ngisho nezilula kakhulu ezifana I-LG Optimus L5 (ngendlela, bekuvele kuthunyelwe lokhu futhi ikhodi isilungele ukuhlanganiswa kuyo I-Github).
Ungangena esigungwini I-Firefox OS ngu I-ADB (I-Android Debugging Bridge), bese usebenzisa imiyalo ejwayelekile efana ne- cat o ls (I-Linux, ngemuva kwakho konke).
Uhlelo lakhiwe izingxenye ezintathu ezibalulekile:
UGecko: igama lizozwakala kubo. Yinjini ephethe ukunikezela ngeGaia (okuyiqiniso, njengekhasi lewebhu) futhi uphathe ama-WebAPIs nezimvume zohlelo lokusebenza. Iphinde ilawule ukuphepha kohlelo.
gonk: Iqukethe izingxenye zeLinux Kernel, abashayeli, kanye neHardware Abstraction Layer (HAL).
Umbono wokuqala ubalulekile
I-Firefox OS yokuqalisa ukugqwayiza, umsila wempungushe uhamba njengomlilo 🙂
Lapho uqala uhlelo, uyabona ukuthi kanjani ukukhanya okuyiqiniso. Ubona ukugqwayiza kokuqalisa okulula kepha okukhangayo, futhi (okungenani ku-OT Fireisikhathi sokuqala simayelana Imizuzwana engu-40.
Ngokushesha nje lapho uqeda ukuqala ubona ifayela le- ukukhiya isikrini newashi, isikhonzi, nethebhu ezansi. Sislayida ithebhu futhi ungabona izinkinobho ezimbili: a ukufinyelela okusheshayo kukhamera futhi a inkinobho ukuvula.
Sidlale eyokugcina, nangesitayela sokugqwayiza fade in ideskithophu iyavela.
Izinkinobho zekhamera nokuvula.
Ideski linezingxenye ezintathu: izquierda, "usesho olunamandla"(bese ngichaza ukuthi imayelana nani); isikhala esingenalutho esinewashi kuso isikhungo (ngicabanga ukubona kahle iphepha lodonga); Noma kunjalo i- kwesokudla bonke izinhlelo zokusebenza ezifakiwe.
Ideski likhumbuza kakhulu i- iOS, yize zivelele izithonjana eziyindilinga ikakhulukazi.
Ukusesha okunamandla ohlangothini lwesobunxele.
Isikrini esimaphakathi, sihlanzekile newashi lakho.
Uma sislayida i- ibha yesimo phansi, a isikhungo sokwazisa ifana kakhulu ne- Android: usuku, opharetha, uhlu lwezaziso, inkinobho yokuzisusa zonke, nangaphansi kwezinkinobho ezithile ukwenza kusebenze kungasebenzi ukuxhumana futhi kuvule imenyu yezilungiselelo. Konke lokhu, njengoba ngishilo ngaphambili, kwenziwe nge I-HTML5 + CSS3 + JS.
Indawo yesaziso. Ngezansi isibali sedatha nezilungiselelo.
Ukubukeka: nobuhle noma isilwane
Uma sijula ​​kancane siyabona ukuthi ukuvela kwezicelo akuhlukile kakhulu kulokho esikujwayele. Ibha yesihloko, enezinkinobho zokubuyela esikrinini esedlule noma wenze izenzo; kanye naso sonke isikrini lapho okuqukethwe kohlelo lokusebenza kuboniswa khona.
Uhlelo lombala oluzenzakalelayo ngu- iwolintshi / mpunga ngomhlophe, kepha onjiniyela bangaguqula izinsizakusebenza ezinhlelweni zabo ukuze bakhe izitayela ezahlukahlukene.
Yize kungewona ukubukeka okuguqukayo, kuvumela izinketho eziningi ezifanayo njengakwamanye amasistimu: uhlu, amathebhu, amamenyu wokukhetha, imigoqo engezansi, amabha wokuhambisa, ukusesha, njll. Yize kuliqiniso ukuthi inephutha lokuklama okuthinta ukusetshenziswa kohlelo.
Uhlelo lokusebenza lwefoni.
Uhlelo lokusebenza lwekhamera.
Isiphequluli seFirefox besingatholakali.
Ulayini ophakathi kwewebhu nezinhlelo zokusebenza ezihlanganisiwe
Leli phuzu libalulekile. Okuzenzakalelayo, I-Firefox OS kufaka phakathi izinhlelo zokusebenza kubalulekile ku-smartphone: incwadi yamakheli, i-SMS, isidlali somculo, ikhamera, igalari, umshini wokubala, isitolo sohlelo lokusebenza, amamephu (INokia HERE Maps, ngasendleleni), Twitter, Facebook ngisho a imitha yokusetshenziswa kwedatha (okuhlanganiswe nendawo yesaziso, noma ngabe lapho ubona ukusetshenziswa kwedatha yeselula kuphela).
Kepha kukhona izinhlelo zokusebenza ezifana Twitter y Facebook, ezingatholakali ifakiwe kodwa bakhona Izinhlelo zewebhu. Noma singathanda Indawo Yemakethe yeFirefox, singakufaka lokho kuphela: isinqamuleli esiya kunguqulo yeselula yekhasi.
Kuyadumaza kancane ukwazi ukuthi kungaba lula kangakanani ngabo ukuguqula lawo makhasi eselula abe yizinhlelo zokusebenza (engeza amanye amafayela, shintsha ikhasi kancane ukufinyelela ama-API wesistimu bese ungeze ukusekelwa kwe-appcache nge-HTML5 noma i-IndexedDB yama-tweets). Into iyafana ngisho neminye imidlalo, nezinye izinhlelo zokusebenza.
Okwenzekayo ukuthi kuFirefox OS kunezinhlobo ezintathu zezinhlelo zokusebenza:
Izinhlelo zewebhu: yizinhlelo ezijwayelekile nezijwayelekile, ezingaceli izimvume ezingaphezu kwalezo ze-HTML5 (njengokusebenzisana nesikrini, noma i-appcache).
Izicelo ezinelungelo: izicelo ezinemvume yokufinyelela kuma-WebAPIs weFirefox OS, futhi ngalokhu kufanele zisayinwe futhi zilandwe eMakethe.
Izicelo eziqinisekisiwe: Njengabanelungelo, kepha beza kufakwe kuqala kudivayisi. Zingaba nezimvume ezingaphezulu, futhi zingasetshenziselwa ukuxhumana nohlelo ngqo.
Njengesibonelo sangaphambili yi imidlalo nezinhlelo zokusebenza ze Twitter y Facebook. Okwamuva, kungaba yifayela le- I-File Explorer (udinga imvume yokufunda noma ukuguqula okuqukethwe ekhadini le-SD). Okwesithathu, kungahle kube yi ukusetshenziswa kwesicelo, eza ngaphambi kokufakwa, ihlanganiswe ne- UGaia futhi ithola imininingwane kusuka ohlelweni lokuthi idatha ingena / ishiya malini ngenethiwekhi ngayinye.
Ngaphezu kwezinhlobo zezimvume, zingaba futhi:
Izinhlelo ezisingathiwe: zimane ziyifayela le-expression elikhombisa i-URL yohlelo lokusebenza olusingethwe kuseva ethile. Uma ngabe uhlelo lokusebenza lwenziwe kusuka kuleli sayithi, kungaba njalo 🙂
Izinhlelo zokusebenza ezihlanganisiwe: yiphakheji ye- .zip equkethe zonke izinsiza (I-HTML, i-CSS, i-JS, i-manifest, njll.ukuze usebenze ungaxhunyiwe ku-inthanethi. Lokhu kusho ukuthi ayidingi i-Intanethi ukuthi isebenze, noma mhlawumbe ukuthola imininingwane edingwa ngumsebenzisi.
Ukubheka lokho, uhlelo lokusebenza lwe-Twitter olwenziwe kahle kungaba kugcwele futhi ngizoba nayo amalungelo kwanele ukufinyelela kufayela le- indawo, Thumela izaziso y gcina ama-tweets imininingwane yakudala neyomuntu siqu ku-cache ukuxhumana naye ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Izicelo eziningi zohlelo azikapheleli ngendlela engingathanda ngayo. Isibonelo, izinketho ezingekho zokungenisa / ukuhlunga / oxhumana nabo beqembu, izilungiselelo ze-SMS / MMS, ama-albhamu kugalari (kuyahlekisa ukuthi kusekela ukuhlela nemiphumela, kepha hhayi ama-albhamu ... imfashini yanamuhla ...), izilawuli ezithuthuke kancane zekhamera, njll. Ngiyethemba ukuthi bazobangeza kuzinguqulo ezizayo.
Ukuntuleka kwezicelo ezijwayelekile nakho kuyinkinga, njengoba kunjalo nange Whatsapp. Ukuthi siyayifuna noma cha Whatsapp uma unquma ukuthandwa kohlelo namuhla, bese ubeka uhlelo (ngombono) bekungeke kube nzima kakhulu futhi.
Ukusesha okunamandla: ukuhlakanipha ngamandla
Phambilini ngishilo i- «usesho olunamandla«. Le ndawo iqukethe izinto ezimbili: okokuqala, a ofuna ngaphezulu. Okwesibili, a uhlu lwezinhlelo zokusebenza zewebhu kuchazwe ngaphambilini futhi kwahlukaniswa ngohlobo. Ngizogxila enjini yokusesha.
Le akuyona injini yokusesha ejwayelekile: esikhundleni sokukubonisa izixhumanisi / amakhasi ahlobene okudingayo, bonisa Izinhlelo zewebhu ukuthi bangakunika ifayela le- okuqukethwe okufunayo. Ngizichaza kangcono. Ake sithi ngisesha «Linux":
Ngakho-ke injini yokusesha ishintsha ushintsho lodonga lube yinto ehlobene nalokho engikufunayo.
Uma ngithinta ukwenza isibonelo ... Twitter:
Ngemuva kwalokho ingikhombisa okuqukethwe ngaphakathi kwalelo khasi elihlobene nalokho engikufunayo.
Ngokuvamile uhlelo akunzima. Into yokuhamba uzungeze ideskithophu ngokuslayida, uvule izinhlelo zokusebenza ngokuthinta izithonjana zazo, ubuyele kudeskithophu ngokucindezela i- inkinobho yokuthinta eyodwa phansi esikrinini noma uwavale ngokugcina leyo nkinobho icindezelwe bese uyislayida phezulu. Futhi ukuhamba phakathi kwezikrini, sinezinkinobho, okhiye emakhoneni noma kumamenyu asemaceleni ukubona izinketho eziningi. Kulula futhi kuyashesha.
Okuthile uma ngithola kukuxaka lokho, yize sinakho Firefox njengesiphequluli, asikwazi ukulanda amafayela, noma ugcine izithombe. Ikhibhodi iphendula kahle, futhi iletha inqwaba yezinhlamvu. Ngingathanda ukuthi bafake inketho yokusebenzisa ifayili le- Ikhibhodi yezinhlamvu ze-T9 ngokuzenzakalela, njengoba kungasiza abantu abavela amafoni wesici, noma ngubani okuthola kunzima ukusebenzisa i Ikhibhodi ye-QWERTY ngosayizi wesikrini.
Futhi, ngasizathu simbe, inzwa yokukhanyisa ayikunciphisi ukukhanya kwesikrini lapho ikhona okuzenzakalelayo. Isiphazamisi sesoftware esingalungiswa. Futhi imicibisholo yemenyu eseceleni nezinkinobho kungaba kukhudlwana, kwesinye isikhathi kube nzima ukucindezela. Impendulo yesikrini incane. Hhayi isikrini kangako, kepha uhlelo olungakashintshelwa kahle ukuthinta komzimba.
Ngale Hardware enesizotha I-Firefox OS inokusebenza okuhle. Njengoba ngishilo ngaphambi kokuthi uhlelo luqale ngokushesha okukhulu, izinhlelo zokusebenza ziyavuleka futhi zivale kumasekhondi ambalwa (kokubili kushisa futhi kuyabanda).
Lapho ubona ukuphuza, kulapho uhamba ngamamenyu athile, noma uqhubekela phambili / emuva emuva kuzinhlelo zokusebenza. Ngisho kwideskithophu ubona ukuphuza kancane. Lapho uphequlula, kubonakala kuphela ngenkathi ikhasi lilayisha, bese ukuzulazula kuyamukeleka ngamathebhu ambalwa.
Isiphequluli sibonakala ukusekela ngokuphelele izindinganiso, mhlawumbe kangcono kunezinye izinhlelo.
Kumele ngithi angikuthandi ukusetshenziswa kwenqubo yokuphatha ngakho-ke i-iOS: lapho uphuma kuhlelo lokusebenza ihlala in kufihliwe, futhi kusebenza kuphela ku- ingemuva uma une insizakalo eyengeziwe ukusebenzisa umsebenzi othile.
Kepha ngesikhathi sokulayisha sezinhlelo zokusebenza, akukubi. Kubonakala kimi ukuthi bahlangabezana nenhloso yokusebenza. Angikwazi ukukhuluma ngokudlala, njengoba ingekho imidlalo edingayo okwamanje. Kepha imidlalo elula isebenza kahle impela.
Ungahle uzibuze ukuthi ngabe inkumbulo yini idivayisiKokubili i-ROM ne-RAM) ayincane kakhulu ngeFirefox OS. Cha, akunjalo. Uhlelo lincane, nezinhlelo zokusebenza ku- I-HTML5 abahlali cishe luthoiningi lalabo engizamile belingaphansi kuka-512KB, imidlalo kuphela ebingama-MB ambalwa). le RAM kwanele, ubuncane obudingekayo, nezinhlelo zokusebenza ezi-2 noma ezi-3 zingavulwa ngasikhathi sinye.
Kulabo abanentshisekelo kokuthile okuthe xaxa kwezobuchwepheshe, besebenzisa umyalo ikati / proc / meminfo (yenziwe nge-ADBNgithole imininingwane kusuka ku- Ukusetshenziswa kwe-RAM: kwe 256MB, eduze 75MB kugcinelwe uhlelo, kushiya okumbalwa 180MB okunye, futhi ngaphandle kwezinhlelo zokusebenza ezivulekile kukhona 40MB mahhala.
Kwanele, futhi uhlelo aluhlupheki ngakho. Ngithole imininingwane ngememori yangaphakathi: uhlelo lunokwahlukaniswa kwe- 200MB (yayo esebenzisa i-154MB ku-FxOS 1.0.1), ukwahlukanisa / isilondolozi unayo 40MB (manje eyami isebenzisa i-1MB) futhi imininingwane imayelana 160MB (engisebenzisa kuyo i-24MB).
Kunesikhala esikhululekile, ngoba ku Android ukwahlukaniswa kwedatha kusetshenziselwa ukugcina isilondolozi se- UDalvik VM. Lapha sigwema leyo "nkinga" ngezizathu ezisobala 😉
Manje, maqondana nempilo yebhethri ... Kungaphezulu noma ngaphansi kwalokho engibe nakho nge Android, kungenzeka kancane kancane. Impela lapha bengilindele okuningi. Isistimu inemodi yokonga amandla ekhubaza konke ukuxhumana, futhi ingalungiswa ukuze isebenze ngokuzenzakalela lapho ibhethri likumaphesenti athile. Akukho okuhlaba umxhwele lapha.
Ukugenca nokwenza ngezifiso: ukufinyelela kuGaia
Njengoba isuselwe kubuchwepheshe beWebhu, ngokuqinisekile inenqubo ye- ngokwezifiso ebanzi kakhulu ezingeni lesibonisi. Ukushintsha ukubukeka ngokuhlela amafayela akuyona inkinga enkulu. Singawasusa amafayela ohlelweni nge I-ADB, shintsha, siyama UGaia, sethula amafayela amasha, saqala uGaia futhi ngalokho singabona izinguquko.
Futhi lapho usebenzisa i- I-Linux kernel de Android, singangeza izinketho i-overclocking, eguqulayo, i-comcache, njll. Ngemuva kwalokho shintsha UGaia, engeza imenyu yezinketho zalokhu kanye ne-voila. Singashintsha futhi i- Izithombe zeGaia CSS ezintsha esizithola lapho. Konke ukukhuluma ngombono, ngoba ngokwazi kwami ​​into efana nale ayikaze isetshenziswe. Cabanga ukuthi ungahamba ibanga elingakanani uma ungenza kanjalo AmaROM wangokwezifiso (I.
Uma ufuna ukubona isibonelo esihle sokuthi yini engenziwa nge UGaia, hlola lesi sixhumanisi de Ama-Hacks eMozilla, lapho bangeze khona kukhibhodi umsebenzi wokuhambisa isikhombisi endaweni yokubhala ngokumane uslayida kukhibhodi (Kwangimangaza ukuthi kungenziwa ngokushesha kangakanani).
Ukuphepha nobumfihlo yizinkinga kushisa muva nje ngakho ngizozama ukungahlanganisi ilangabi. Lowo msebenzi uvela nano.
Ipulatifomu yewebhu ayiphephile kakhulu, futhi abafana abavela I-Mozilla babekwazi lokho. Ngakho ukuvikela I-Firefox OS, uthathe izinyathelo ezahlukahlukene ku- UGecko, injini ephethe i- nikela ngeGaia nezicelo.
Njengoba ngishilo ekuqaleni, UGecko ilawula i- I-WebAPIs, okukuvumela ukuthi usebenzise izici zefoni njenge Indawo, Isitoreji, njll. Okwesicelo sokufinyelela lezo Ama-API, kufanele ube nemvume esungulwe ku- bonisa, futhi isayinwe ngu- I-Mozilla. Kuphoqelekile futhi ukukhombisa ku-expression kudingeka imvume yamuphi, ukuze ingasetshenziselwa noma iyiphi injongo eyingozi.
Ukuvimbela uhlelo lokusebenza shintsha i-expression yakho ukufakwa, kuthathwa izinyathelo ezimbili eziyinhloko: izinhlelo zokusebenza ezifakwe kuqala kuphela ezingafinyelela ukwahlukaniswa kohlelo, nakho konke izinhlelo zokusebenza ezinelungelo zigcinwa kumafolda ngamanye nge Ama-UUID (yebo, amakhodi afana nalawo asetshenziselwa ama-hard drive).
Leyo khodi iyahlukahluka kulo lonke uhlelo lokusebenza nakuwo wonke amadivayisi. Lokho wukuthi, uma ngabe uhlelo lokusebenza olunelungelo belikwazi ukufinyelela ohlelweni, kusazodingeka luqagele kuphi nansi i-manifest yakho, ubheka amasethi wamafayela. Noma kunjalo, kuyinto engeke inganakwa lapho ibuyekezwa ngu I-Mozilla.
Lapho uhlelo lokusebenza ludinga imvume ye- API ikakhulukazi, isibonelo, lokho kwe indawo, isixwayisa ngomyalezo esikrinini ukuze ukwamukela noma ukwenqaba.
Uma ngokuhamba kwesikhathi sifuna ukuyiguqula, sivula ifayela le- Izilungiselelo, sizoya "Izimvume zohlelo lokusebenza«, Futhi lapho singakunika izimvume esizifunayo.
Isinyathelo sokugcina esathathwa kwaba ukunika amandla i- I-Sandbox lapho zonke izinhlelo zokusebenza zisebenza khona. Vimbela idatha kusuka kuhlelo lokusebenza olulodwa ukuthi isetshenziswe abanye ngaphandle kwemvume (amakhukhi, amaphasiwedi, njll.).
Uma uhlelo lokusebenza olulodwa ludinga ukuqedela isenzo esisodwa nolunye, limane nje likunxenxe ngamapharamitha afanele, kunokwenza isenzo sodwa nedatha yohlelo lokusebenza.
Isibonelo, uma uhlelo lokusebenza ludinga finyelela koxhumana nabo, izokuqondisa kabusha uye ku- «iwindi»Kusukela isicelo Oxhumana nabo ukuze ukhethe okukodwa, esikhundleni sokubacela bonke ohlelweni bese ubakhetha lapho.
Kukhona nemininingwane yobumfihlo. Ngenkathi kunenketho yokuthumela imibiko yesiphazamisi ku I-Mozilla, Basho njalo alukho ulwazi lomuntu siqu oluthunyelwa (okungenani izwe). Ngaphezu kwalokho, sinenketho kwimenyu Izilungiselelo lokho kuhlanganiswe ohlelweni, i- «edumile«Ungalandeli«. Uma sikwazi, lokhu akuphazamisi isiphequluli kuphela, kodwa futhi nazo zonke izinhlelo zokusebenza zewebhu.
Ohlelweni olusha, esikhathini lapho abanye abancintisana nabo sebevele bethuthukile, kwaqala ngesisekelo esizinzile. Yiba ngokusekelwe ku I-Android Linux kernel ikuqinisekisa ngokuziphendukela kwemvelo njalo.
Uhlelo luhlangabezana nokulindela kwalo shazi: isikhombimsebenzisi esisebenziseka kalula, ngokusebenza okuhloniphekile, impilo yebhethri emaphakathi, kanye nezinhlelo zokusebenza eziyisisekelo.
Ngiyayithanda indlela izinhlelo zokusebenza ezisatshalaliswa nezilawulwa ngayo, futhi injini yokusesha enamandla isiza kakhulu (uma yamukela imisebenzi efana ne-Google Now, ingaheha kakhulu). Inamathuba amaningi wokwenza ngokwezifiso, udinga nje ukuwasebenzisa.
Uma bekufanele ngikhononde ngokuthize, kuyiqiniso ukuthi ukusebenza nempilo yebhethri kungaba ngcono, futhi ngithanda ukubona i-interface evelele kokunye.
Ukuntuleka kwezicelo esezikhona kwamanye amapulatifomu, kubonakala kimi ukuthi kuzoxazululwa ngokuhamba kwesikhathi lapho uhlelo luthola ukuthandwa. Ngiyethemba ukuthi izofinyelela futhi idlule i- i-WebOS engasasebenzi, eyayifana kakhulu futhi manje ingumthombo ovulekile.
Ngamafuphi: ube nevoti lokuzethemba. Okwezethameli ezihlosiwe (izimakethe ezivelayo noma abantu abangakabi nayo i-smartphone), ithobela ngaphandle kwezinkinga.
Yebo, ngokususelwa kukho konke lokhu, ngikushiyela ukuhlolwa:
Akubonakali kukubi kimi, kodwa kusekude phambili. Yena Alcatel One Touch Umlilo (futhi ngicabanga ukuthi ne-ZTE Open) ukuhlela ukuthola Izinhlobo ezi-2 noma ezi-3 okuningi, kusukela I-Mozilla Akanazo izinhlelo zokwenza ushintsho olukhulu kangako ngaleso sikhathi.
Ngiyethemba usithandile isibuyekezo, futhi uma unemibuzo, zifole bese uzishiya ngezansi kumazwana 🙂
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ukubuyekeza: isonto ngeFirefox OS
Amazwana ayi-143, shiya okwakho
Isibuyekezo esihle kakhulu !! Bengifuna nokubheka le Mobile OS, engikuthande kakhulu ukuthi izwakala ilula kakhulu, iyisixhobo "sokungena" futhi isenza imisebenzi yayo kahle kakhulu.
Ngifuna ukulinda Ubuntu Ucingo, futhi nginethemba elikhulu lapho, injini ye-Android java ingithukuthelise kakhulu, yize ngingayishintshi nge-iOS, kusuka kuWindows Phone ngizwile izimanga maqondana nokusebenza, yize mina uqobo ngikwazile ukukuhlola.
Kumawindi ngokujwayelekile ngizwile izimanga, futhi uma kungenxa ye-MS, bangitshela ukuthi yelapha umdlavuza nengculaza, ngokuvula nje imenyu yayo (uxolo, abanayo i-xD)
KAKHULU. Okunye okuhle engikubonile kuDesdeLinux. Isibuyekezo esihle kakhulu ...
Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu ^^ Kuthathe isikhathi esithile kepha bekufanele.
ukubuyekeza okuhle kakhulu, siyakuhalalisela, kunethezeka impela, ngikhumula isigqoko.
Kazi ingafakwa yini ku-S3. Ngihlela ukukuguqula kube lokhu noma kube yiCyanogenMOD
Ngicabanga kanjalo. 😉
Lolu daba luyinkimbinkimbi ngandlela thile ngenxa yabashayeli be-Exynos CPU (buza iCyanogenMod ...), kepha kubonakala sengathi uma http://brain.cc.kogakuin.ac.jp/research/fxos-e.html
Noma iyiphi ifoni enekhodi yakho yomthombo we-Android 4.0 kufanele ikwazi ukuyisebenzisa 🙂
cha ngiyabonga. Ngenzeka kuCM
Kuhle kakhulu, kumane nje kuhle kakhulu. Ngangikubonile okusalungiswa futhi umlomo wami wawunisela ukuwufunda uqedile futhi unezithombe. Halala.
Iqiniso ukuthi i-OS kuphela engiyithandile esezingeni eliphansi iwindows phone ... ilula kakhulu, ekugcineni okuphezulu ayikho engikholisayo, i-iOS ne-Android ziyefana kakhulu .., kakhulu ngendlela engiyithandayo.
Windows Phone, sina? Zama iFirefoxOS uzongitshela uma usenombono ofanayo 😉
Lapho uneselula enesisombululo esincane esingu-800 x500, yini uhlelo lokusebenza nezinye izinhlelo zokusebenza, ukubukeka okungcono (okwamanje kubukeka kumbi ..), ikhamera encane engu-5 Megapixel nokunye, ngizozama.
Lokho akusekho ukuphela okuphansi.
Ububanzi obuphansi buyiselula engaphansi kwama-euro angama-200, i-lumia engikhuluma ngayo ibiza ama-euro angama-140. ibanga eliphakathi liphakathi kuka-200/400 nokuphakama nakho konke okudlula ama-euro angama-400.
ELatin America (okungenani, ePeru), amandla okuthenga akwanele ngisho nakuselula engama-euro angama-130 (uma ngikutshela ku AmaLanga Amasha okuyimali yendawo, uzophula ikhanda lakho ekuguquleni amathe abe ama-euro). Ama-euro angama-110 kuphela esiwabheka njengebanga eliphakathi nendawo, ngoba ekugcineni okuphezulu, bebezovele babe phakathi kwama-euro angama-120 kuya phezulu.
Besivele sikhulume ngakho phambilini, futhi ukuthi unemiqondo emincane eyeqekile mayelana nokuthi ibanga eliphansi liyini, yeka ukuba yisithutha se-xD
Ububanzi bama-mobiles buyahluka ngokuya ngeholo lakho lomuntu ngamunye, uma unenhlanhla yokuhlala ezweni eligcina imali engenayo yomuntu ngamunye engu- $ 1000, ungadela ama- $ 25 ngenyanga, iminyaka emibili ukushintsha ama-terminals ($ 2) ukuthenga iselula oyithanda kakhulu ... lokho okushiwo inani elilinganiselwe. Uma wenza njengami futhi ufihla ama- $ 600 ngenyanga, ukhipha i-Iphone njalo eminyakeni emi-35 futhi ngaphezulu kwalokho uthengisa itheminali yakho endala cishe ngama- $ 2-300. Uma u-450 ekhaya… Qagela ukuthi iyiphi enye? Ngempela, ama-Iphone ama-2 ngentengo eyodwa, bafowethu abahle ukuthi sinemali esele!
Ngeshwa, ngiyaqonda ukuthi akuwona wonke amahora angena ku- $ 1000 ngenyanga, ngisho ne- $ 500 ...
Uma sazisa ukuphela okuphezulu ku- $ 25 ngenyanga ngomholo wama- $ 1000; Sineholo lamaRandi angama-500 elingahambisana netemu elingu- $ 12,5 ngenyanga ngakho-ke uma umholo wakho noma imali oyitholayo ingama- $ 250, isikhathi esiphakeme esihambelanayo sizoba ngu- $ 6,25: akukho ngaphansi kuka- $ 150!
Njengokujwayelekile, kulula ukwehlukanisa u- $ 25 kusuka ku- $ 1000 kune- $ 6,25 from 250 ... so I am with @ pandev92; $ 120 ingahambelana nokuba ne-terminal ephezulu.
Lokho esikungenayo ukungena noma uhla oluyisisekelo lungaba yinhle kakhulu endaweni ngeqiniso elilula lokuthi lisha futhi selivalwe ngumnikazi walo oziqhenyayo.
Ngicabanga ukuthi okudingayo noma okuncane lapha: http://www.geeksphone.com/es/ 😉 Okushoyo akuyona into ephansi, kepha kusekhona. Futhi udaba lweWhatsApp, ngifakazela ukuthi uhlelo lokusebenza luzophuma (uma lukhona lweSymbian, ngoba akukho okubabiza ngeFxOS ...).
Sengivele ngifuna ukubona ifoni enamandla amancane njengaleyo engisebenzisa i-WP8 (noma i-9 uma iphuma).
Uma ibanga eliphansi, ngaphansi kwama-euro angama-150.
Ayinazici ezisezingeni eliphansi. Isiphetho esiphansi samanje yi-ARMv7 noma i-Cortex-A5, ene-512MB ye-RAM ne-3-4 ″ ekhombisa kahle. Ngingabeka leyo Lumia phakathi nendawo (mayibe uhla oluphansi lwe-WP ngoba ayikho enye into yesimanje futhi enamandla amancane, kungenye into).
Namuhla bangitshele ihlaya: «Yini uDarth Vader ayigcina efrijini? Yebo, 'Ice Cream Emnyama' !!! » Phakathi kwalokhu nalokhu osanda kukubhala, benze usuku lwami lwaba mnandi kakhulu.
Isibani seWindows Phone ... O Nkulunkulu wami!
Awusebenzisanga ifoni yamawindows ngokusobala….
Ukubuyekezwa okuhle kakhulu, ngithanda okufana nalokhu lapho kuphuma Ubuntu Edge
Ubuntu Edge izobiza kakhulu, futhi-ke, izobhekiswa ekugcineni okuphezulu kakhulu .. Bheka nje izithombe zalokho abahlose ukukuthengisa .. Kuyamangalisa.
Yebo, uma umuntu ovela emphakathini ekhokha ngaphezulu kwe- $ 800, nokuyinto ezofaneleka uma ingena emakethe (okungenani), wamukelekile ekubuyekezweni xD
Ngifuna ukushintsha i-nokia yami ukuthi uma ngiyivuselela ifuna ukufaka iSkype, iMicrosoft Office. Cha, akunakuba njalo, ngiyethemba ukuthi uhlelo olumahhala oluvulekele ukubambisana nale firefox os.
Uthatha ngokungalungile: INokia ihlangene neMicrosoft. Into enhle ukuthi uthenga iselula komunye umkhiqizo.
Futhi-ke, uma kuliqiniso, i-athikili muhle kakhulu.
+10 sekuvele kuyizintandokazi
I-AurosZx, uyisibuyekezo esinzima, esihle kakhulu, ephelele, elula, ngaphandle kwesizotha samanga, olinganiselayo futhi obonisa kakhulu ukuthi iFirefoxOS iyini. Ngiyakuhalalisela futhi ngiyabonga ngezinto ezinjalo zobuchwepheshe.
Manje, umbuzo wawo wonke umuntu: Ingabe ikhona inguqulo etholakalayo yanoma iyiphi yalezi Smartphones enganikwanga i-Movistar?
Kukhona iGeeksphone Keon nePeak, zivela kunjiniyela kepha ngicabanga ukuthi azisathengiswa. Ngithole ne-zte evulekile ukuthengiswa ku-ebay US / UK nge-80USD.
I-Keon ne-Peak ingezonjiniyela, yebo, kepha kukhona i-Peak + yemakethe yabathengi, njengoba besho, futhi isivele ithengiswa ngaphambili.
Kuzofanele ngiqale ukuyifuna! Ngiyabonga okungabonakali15 y nano
Ukubuyekeza okuhle kakhulu uze uveze »i-WhatsApp uma inquma ukuthandwa kohlelo kulezi zinsuku» okuwukubongwa komuntu siqu, ingabe ukhathazeke kakhulu ngokuba nesicelo esizinze e-USA njengoba izinto zinjalo namuhla, ngine I-Android futhi angiyisebenzisi iWhatsApp, ngaphezu kwalokho, uma ngingasusa zonke izinhlelo zokusebenza ze-Google ocingweni lami ngingazisusa futhi, uma kungenjalo ngiyavumelana nombono wakho wekusasa iFirefox OS ezoyikhuluma, ngoba manje isiqalile kahle .
Uma kukhulunywa ngokuthandwa, empeleni izicelo zibaluleke kakhulu kunesistimu uqobo (qaphela ukuthi ngikhuluma kuphela ngokubuka kokuphakanyiswa).
Yini into yokuqala umuntu ayifunayo uma evula iselula yakhe entsha? WhatsApp, Facebook, Youtube, njll. Awunabo? Akusizi ngalutho. Lokho kulula
Ikakhulukazi ngikhangwa kakhulu yiFirefox OS kodwa bengingeke ngiyisebenzise ngoba ngisebenzisa kakhulu izinhlelo ezinjengeCalenGoo, i-Evernote neSpotify ezingekho eFirefox Marketplace, futhi noma ngabe uhlelo lungehle kangakanani futhi ngiyayithanda kangakanani design, ngokususelwa ku-Linux, ngobuchwepheshe bewebhu njll, ngaphandle kwezicelo zami zansuku zonke kungaba yize kimi.
Ngamafuphi, i-AurosZx ilungile, izinhlelo zokusebenza zinquma ukuthandwa kohlelo futhi iWhatsApp iyona ebamele kakhulu namuhla.
»Ngamafuphi, i-AurosZx ilungile, izicelo zinquma ukuthandwa kohlelo futhi iWhatsApp iyona ebamele kakhulu namuhla.»
Kungani esho njalo futhi kungani umeseka? IViber yenza okufanayo neWhatsApp futhi ayizinze e-USA, isisekelo osisebenzisa njengokuthandwa kwami ​​asivumelekile ngoba kuyinto yomuntu siqu, izinhlelo ozifunayo (i-Facebook, i-YouTube, mhlawumbe nokunye) kuselula Anginantshisekelo yokuthi yiziphi izinhlelo zokusebenza ezingekho? hehehe empeleni iFirefox OS isencane, nami bengingeke ngiyisebenzise, ​​yingakho ngilandela lezi zinhlobo zezibuyekezo ukwazi ukuthi ngizoyisebenzisa nini ngempela njengesistimu yami yokusebenza yeselula.
Uyabona ukuthi okwakho wukwazisa komuntu siqu? Usho njalo tú awusebenzisi iWhatsApp nokuthi yini tú uncamela iViber ye- tus izizathu zethu, kepha asikhulumi ngokuthi amakati amane athanda ini kepha lokho okuthandwa yimakethe, futhi imakethe isitshela ukuthi cishe abantu abayizigidi ezingama-300 i-WhatsApp iyilokho futhi ngeke nje bathenge iselula lapho bengakwazi ukuyifaka khona.
Ake ngabelane ngesixhumanisi nawe:
Angilithandi ibhola kodwa lelo libizwa ngokuthi IGOLI 😀
Iphuzu, amaBurjans, ukuthi ungowedlanzana elingakhathaleli kangako ngalokho, ngamagama anokhahlo (futhi ngaphandle kokucasula) wena noma mina, asibala. Kulula kanjalo, noma singasho kangakanani ukuthi "ngingahlala ngaphandle kwalokho" siyimvuthu elula, ukusakazeka okuncane kwabo eduze kwentaba uma siziqhathanisa nenqwaba yabasebenzisi abajwayelekile abahluthwa ngomsindo uma kuwhatsapp ku i-USA.
Ingabe iViber yenza okufanayo? … Impendulo eqotho? YEBO futhi ubani onendaba? Yini enhle uhlelo lokusebenza olwenza into efanayo kodwa olungasetshenziswa noyedwa wabangane bami? Isisekelo sokuthandwa yisibalo sabantu abayisebenzisayo, yingakho i-Facebook ibaluleke kakhulu kubasebenzisi abaningi, ngoba iningi labangane babo bayayisebenzisa futhi kuyindlela yabo yokuxhumana ephumelela kakhulu ... ngibeka ikhava ye-WhatsApp ngoba ngengxoxo ye-facebook ngino-80% wabangane bami abaxhumeke njalo kanti amanye ama-20% aku-Hangouts.
Ngakho-ke, ngokufingqa (nokucacisa ukuthi angifuni ukukhubekisa) ukubonga kwakho komuntu siqu akunamthelela omncane esitatimendeni sokuthi izinhlelo zokusebenza ezidumile zenza uhlelo luthandwe 😉
Ngikhuluma umumo jikelele. Angisho ukuthi azikho ezinye izindlela, futhi ikakhulukazi anginakho okubi ngalolo hlelo ... ngisinde eminyakeni (ngeSony Ericsson J100i yami endala ngasemaphethelweni weSMS / E-mail, ngingaqhubeka nokukwenza. Uma ngikhathazekile ngobumfihlo bami, njengabaningi, futhi ngicabange umqondo wokushiya izinsizakalo zakwa-Google (njengawe). Kepha labo uma ngenelisekile, okwamanje ngizoqhubeka ngokufanayo.
Futhi uma ungazi, ngommeleli, ungazisusa zonke bese ubheka ezinye izindlela (i-Google Play Isitolo> F-Droid, Amamephu> OsmAnd, GTalk> jTalk jabber, njll), ukuthi ziningi 🙂
Ngiyethemba awuzizwa ucasukile noma yini efana naleyo, imikhonzo 🙂
Angikhubekisi nakancane, njengoba abaningi besho, lo mbhalo muhle kakhulu, kepha phakathi kwakho konke ukungabi bikho kwezicelo iFirefox OS enakho lapho izalwa, ugxile kuWhatsApp, ngakolunye uhlangothi, iselula yami iza ne-Android, uhlelo ezenziwe i-Google, izinhlelo zokusebenza (i-Gtalk, i-Gmail, i-ect) zikhona noma ngabe angizisebenzisi, angifuni ukuzisusa hleze ukuphela kukamakhalekhukhwini wami kuphuke
Jonathan khulekani (@khulekani) kusho
Izimbiza ezinhle kakhulu, inhloso enkulu, izinto ezimbalwa nje ukucacisa, ukubukeka kwenziwa ngokufana nalokho okuyi-Android ne-iOS ukuze abantu bangakutholi kunzima futhi kufanele bafunde izinto ezintsha, ezinye izinto, ngithole ithuba lokuzama zombili amaqembu ezentengiso eVenezuela (i-ZTE OPEN ne-Alcatel One Touch Fire) futhi ngokubona kwami ​​iZTE OPEN inokusebenza okungcono, ekuphenduleni okuthintekayo nasekusebenzeni okungcono ngezinhlelo zokusebenza, i-Alcatel kuphela engiyibona kangcono kumsindo nakukhamera.
Ubalule nokuthi ngokuzayo bangenza ama-Custom ROM, iFirefoxOS ngokuba nekhodi yomphakathi okufunwayo ukuthi abathuthukisi abanombono bakufake ngqo ekwakhiweni kohlelo.
Phendula kuJonathan (@motiongeek)
Eqinisweni, noma iyiphi i-ROM abayenzayo inganikela ohlelweni, ngoba uma ku-ROM basebenzisa noma bathuthukisa okuthile obekushoda noma okungaphumelelanga ohlelweni lokusebenza, lesi sici singahlanganiswa ku-FxOS uqobo.
Ngaphezu kwalokho, ohlwini lwama-imeyili naku-Google Groups, abafana baseMozilla bahlala begqugquzela abantu ukuthi babambisane ukuze bangeze "izinto ezisunguliwe" kukhodi ngqo, esikhundleni sokuyibheka kwenye indawo bese beyithatha ngaphandle kokusho noma yini (okunguyebo, ukuzwa kwehlukile).
Ukubuyekeza kuhle! Benginenye yama-androids okuqala eSamsung futhi nesikrini sonakele futhi ngifuna i-smartphone entsha efinyelelekayo, bengibonile ukuthi i-firefox OS ibizoshibha kakhulu kepha bengilinde ukubuyekezwa kwalolu hlobo, I cabanga ukuthi ngizothenga 🙂
Ukubuyekeza okuhle kakhulu, ngineZTE Open ezinsukwini ezimbalwa (iyi-smartphone yami yokuqala) futhi ngingeza ukuthi isidlali somculo siluhlaza okotshani, kimi, nginezingoma eziningi ku-sd (+400), ngakho-ke Kufanele ngibheke phakathi kwabo ngaphakathi kohlelo lokusebenza lomculo kuyisidina (ayinayo injini yokusesha) futhi uhlu lwadlalwayo lumbalwa futhi alunakuguqulwa. Ikhava yohlelo lokusebenza uqobo (ikhombisa amakhava wezingqikimba uma zinazo) akukubi kepha kudla izinsiza eziningi lapho ngiphenya kimi.
Luhlaza impela emininingwaneni efana nesidlali sevidiyo (singishaye kaningi ezinsukwini ezimbalwa) noma esikuhlelo lokusebenza lokusetshenziswa olungakhombisi i-Wi-Fi kubha yezaziso.
Yize kufanele ngithi isiphequluli singimangazile, ngilayishe ikhasi ngama-gifs asindayo futhi ngaliphenya kalula.
I-Solidus pacheco kusho
Phendula kuSolidus Pacheco
Okuthunyelwe okuhle kakhulu, okuhle kakhulu.
Bengizothanda ukuzama ukuyihlanganisela i-Galaxy Mini Plus yami, kodwa ngeshwa i-pc yami idinga imemori ethe xaxa futhi kunaleyo ye-Heimdall, enye indlela eya ku-Odin (iyilokho okusetshenziselwa ukukhanyisa ama-terminals ngama-ROMs okuqala namanye aguquliwe ) wayisekela.
Inamandla amancane kune-terminal yakho (i-AMRv6 CPU e-836MHz kanye ne-286Mb ye-RAM) kepha isazohlolwa ...
Ku-Mozilla Wiki bathi i-ARMv6 iyasekelwa, abanye abantu bathi cha ... Kepha ungazama. Khumbula ukuthi udinga ikhenela ehambisana ne-ICS, noma izokwehluleka.
Ngokomqondo, iCyanus Kernel (okuyiyona engiyifakile) kuzodingeka yanele ngoba iyahambisana neCyanogenMod 7 no-9 (no-7 ilingana ne-ICS)
Cha, u-7 ulingana no-Gingerbread (G uhlamvu lwe-7 lwezinhlamvu zamagama), 9 uma kuyi-ICS. Kepha uma i-kernel iyahambisana, kulungile.
Umsebenzi omuhle, ulinde ukuhlola lolu hlelo.
Okunye kokubuyekezwa okuhle engikubonile lapha, kubi kakhulu i-FiefoxOS ine-lag ethe xaxa kunendawo ephansi ye-Samsung.
Super qedela isibuyekezo!
Lapho ngithola i-smartphone ngicabanga ukuthi ngizokwamukela le fox encane <3
I-red panda bro, ipanda elibomvu.
Well lokho akubukeki njengepanda » https://blog.desdelinux.net/wp-content/uploads/2013/08/FFOS_320x480_000.jpg?73b396
Ibhekisela egameni leFirefox ekuhumusheni kwayo kweSpanish, hhayi ilogo uqobo.
Andres Lazo kusho
Kukhona uhlelo lokusebenza olukuvumela ukuthi usebenzise ukusesha nesiqalisi (okusemthethweni, hhayi itimu) yeFirefox OS ku-Android. Igama layo yi-Everything Home (Beta). Kuhle kakhulu: http://goo.gl/PBlQcS
Phendula u-Andrés Lazo
Kungani izinsuku zokuhamba kwakho eMexico zingashicilelwanga? : /
Ngicabanga ukuthi sengifundile ukuthi kungenzeka ngifike lapho ekupheleni konyaka. Futhi nase-USA (enama-opharetha), nakwamanye amazwe, kuzoba ngonyaka olandelayo.
Isibuyekezo esihle kakhulu, sijula ​​kakhulu kunalokho ebengikulindele lapho i-imeyili yesaziso ifika. I-10 kumbhali!
Ngokuqondene neFirefoxOS uqobo, ngiyathanda ukuthi ivele. Lapho i-Android iphuma, bekukhulunywa kakhulu nge-Linux kernel, ehambelana nenkululeko, yebo, yebo, yebo, bese sine-Google esobheni, futhi banesifiso sedatha yethu kakhulu. Iqiniso lokuthi isisekelo seMozilla siyabandakanyeka linikeza ukuzethemba okukhulu, njengoba kwenza neFirefox maqondana neChannel. Yebo, amagama ami abhalwa ngokulangazelela avela kuWindows, kepha ngingalokotha ngithi kule Android kubi kakhulu (oh, linda! Iselula yami iyi-Android nethebhulethi yami nayo! XD).
Futhi ukuqeda odabeni lokuthandwa kwezicelo ngivumelana ngokuphelele nakho konke okushiwo nguNano. Ngisebenzisa i-Facebook, ne-WhatsApp, futhi ukube bekuya ngami bengizosebenzisa i-Diaspora (ngiyinakile kakhulu) nekhasimende le-Jabber, kepha ngingaxhumana nobani? Hhayi nabangane bami nomndeni wami, lokho kuqinisekile.
Ngiyabonga - isixazululo sezokuxhumana kungaba ukusebenzisa iJabber ngayo yonke into. Ngoba iklayenti leJabber likuvumela ukuthi uxoxe nabantu kusuka kunoma iyiphi iseva, inqobo nje uma linguJabber. Isibonelo, kusuka kwaGTalk ungabhalela abantu abasebenzisa iJabber ehlanzekile, futhi okuphambene nalokho.
inkinga ukuthi manje ngoshintsho olusuka ku-Gtalk luye kuma-Hangouts awusakwazi ukuxhumana ne-akhawunti yakho ye-Jabber XMPP koxhumana naye we-Hangouts, awukwazi ngisho ukuwangeza.
Damn Google nokuzimela kwayo.
Ngine-akhawunti ye-dukgo.com XMPP, bengicabanga ukushiya i-Gtalk ngokuphelele, kodwa kusizani uma bonke engixhumana nabo basebenzisa ama-Hangouts?
Lapho benza ushintshela ku-Hangouts, i-Pidgin yayeka ukusebenza, kodwa ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, ngakwazi ukuqhubeka nokuxhumana nabangane bami ngisebenzisa ubuchwepheshe obusha be-Google.
Kepha ku-Pidgin kusebenza kuphela phakathi kwama-akhawunti we-Google.
Uma ukwenza ngenye iseva ye-XMPP, ayihambisani nama-Hangouts amasha. Sengivele ngiyizamile ngomsebenzisi weJabber XMPP noma ngubani osePidgin nomunye one-akhawunti ku-Gmail (Hangouts), ngiyazama ukwengeza oxhumana nabo noma ukuthumela imiyalezo futhi abafiki. kepha uma ngibuyisela i-akhawunti yakwaGoogle engxoxweni yakudala (Gtalk), kusebenza kahle lapho.
Ah yebo, yebo yebo. Kepha hheyi, izinwele ezivela ku-Wolf. Le Google ene monopoly yayo .. amadodana ka p% $ # @, kufanele bakumangalele.
UFranz D. kusho
IGoogle nep ... ezibazalile.
Leso kwakuyisikhuni esibi kakhulu abasithumele ngonyaka, kususwa ukwesekwa kwe-XMPP ngenxa yaleso sikhwama se-Hangouts. Okubi kakhulu ukuthi abantu bayizimpumputhe futhi bayathathwa. ngenxa yalokho abaningi bayathuthuka kusukela ku-Gtalk endala kuya kuma-Hangouts.
Njengoba ngizama ukulandela isoftware yamahhala futhi ngisebenzisa iseva ezimele ye-XMPP, kungenza ngiphelelwe othintana nabo futhi kungabikho engizoxoxa naye.
Ngakho-ke ngiphoqeleka ukuthi ngisebenzise ama-Hangouts ukuxhumana nabangani bami.
Phendula uFranz D
I-Gmail ikunikeza ithuba lokusebenzisa i-XMPP noma i-Hangouts, ngiqhubeka nge-XMPP impilo yami yonke futhi ngiqhubeka nge-Gtalk ngaphandle kokubuyekeza ku-Android 2.3.6.
kodwa kungekudala noma nini, ngokwazi i-Google, ama-Hangouts azoba yisibopho futhi i-Gtalk izogcina ivaliwe
Iqiniso ukuthi ngakho konke engikufundayo, ngizwa isifiso sokukuthenga. Ngokusobala, ekubeni i-OS kususelwa ku-html5, kwezinye izimo kuzoziphatha kanjalo (isiphequluli) futhi nangaphezulu ngemininingwane enayo. Ithemba iMozilla izosebenza emaphutheni, ngoba iFirefox OS enekusasa elihle ngaphambili kwayo.
U-Andres Morelos kusho
Ukubuyekezwa kuhle kakhulu, sengizothenga i-Alcatel OneTouch Fire hehe
Phendula u-Andres Morelos
Ukungena okumangalisayo. Lokho kunikeza ikholi, manene 😀
Lapho i-nokia 500 yami ene-nokia belle ithatha umhlalaphansi, ngifuna ukushintshela kule OS kade ngiyivivinya kusuka kusiphequluli se-firefox. → http://lamiradadelreplicante.com/2013/07/12/mozilla-anuncia-la-version-4-0-de-firefox-os-simulator/
Ngabe ukhona okwazile ukufaka iFirefox OS kwi-Samsung Galaxy Ace?
Ngijabule ukukwenza, kepha nginovalo lokuthi umakhalekhukhwini wami uzoba usinda wephepha.
Ayitholakali ku-Ace, empeleni okuwukuphela kocingo oluneprosesa ye-ARMv6 enalo iGeeksphone Zero (itheku elizimele). Cabanga into efanayo naleyo ebengiyisho ku-Son Link ngenhla.
Futhi bekungafanele yini ukuthi iFirefox OS ibe ngezamafoni aphansi?
Inkinga ukuthi uma kuqhathaniswa, i-ARMv6 indala futhi inamandla amancane kune-ARMv7 / Cortex-A5. Kungakho manje kusetshenziswa i-ARMv7 kuphela ebangeni eliphansi, kanti iMozilla yalesi sizathu ibeka phambili leyo modeli. Futhi, ukusekela i-ARMv6 (kungaqhubeka) kudonsele ekusebenzeni. Nayi ividiyo ukuze ubone ukuthi iFxOS isebenza kanjani nge-ARMv6 http://www.youtube.com/watch?v=3GiUwtNkLGk
Ukusho nje izinto ezimbili: Okuthunyelwe okuhle kakhulu! futhi ngifuna idivayisi yami ngeFirefoxOS!
Okuthunyelwe okuhle kakhulu, isimanga sangempela, ngokuqondene neFifrefos OS kubukeka kukuhle, ngethemba ukuthi kungafakwa kwi-galaxy mini yami encane bese kungena esikhundleni se-cyanongenMOD, okuthi noma ngabe isamanzi kakhulu kune-Android esemthethweni, phela isese-Android.
Ukubingelela nokuthunyelwe okuhle kakhulu !!!
Uxolo, bengisho ukuthi "Firefox OS"
Okuthunyelwe okuhle kakhulu, kuhle…. Sengivele ngifuna ukuhlola uhlelo lwe-xD
Ukubuyekeza okuhle kakhulu… ngabe uyazi ukuthi yimaphi amadivayisi angaphatha lolu hlelo?
Ukubuyekezwa okuhle kakhulu kweFirefox OS. Okuwukuphela kwento embi ngeFirefox OS ukuthi izogxila kuMalestar kuphela (Uxolo, Movistar).
Bamba kancane, Iceweasel OS!
Kukhombisa ukuthi awenzanga umsebenzi wakho wesikole u-Eliot futhi ukhuluma ungazi.
I-FxOS ayinayo inkontileka ekhethekile nanoma ngubani, ubufakazi balokhu ukuthi abakhiqizi abaningi banqume ukubheja kuyo, kufaka neFoxconn.
ITelefónica ingomunye wabasebenza ngokusebenzisana okunikela ekwakhiweni kweFxOS ukuthola okucacile, okuyizimpawu ezilungele yona ukuyimaketha, kepha akuyona umkhawulo nhlobo futhi noma ngubani opharetha ofuna ukujoyina angathengisa ngokuthula izingcingo noma yimuphi umkhiqizi ozisebenzisayo. hlinzeka ngaphansi kwamabhendi e-GSM awasebenzisayo.
Ngeshwa, igatsha lasePeruvia iTelefonica linikeza insizakalo ebi kakhulu kunaleyo engabekezeleleki (cishe ama-dollar angama-30 nge-1 mbps ehunyushwe kusuka entengo yemali yendawo) futhi yiyo ehola i-oligopoly yocingo ekhona ezweni engihlala kulo.
I-PS: Ngisusa izinambuzane engizethule kuFirefox OS.
I-athikili enhle, kepha kuthiwani ngokuvula inethiwekhi? Ikhodi ye-NCK? Kumahhala ...
Kuncike ezweni. ESpain banikeze ikhodi yenkululeko kunoma ngubani oyifunayo, lapha eVenezuela bathi "akukho emthethweni" (izinkohliso ...).
Lokhu ukubuyekeza njengoba kufanele kube hhayi umbhedo. Umsebenzi omuhle kakhulu. I-Android ngenkathi isencane neDonut yayinezici ezimbalwa kakhulu futhi ayikhonondanga kangako. Phila iFirefox OS yize kukhona ukukhononda kwalabo abangayithandi.
I-athikili enhle kakhulu! Iqiniso ukuthi iFirefox OS iyanginaka futhi ngithanda ukuyizama, kepha angazi ukuthi izofika yini e-Argentina ngesikhathi esithile ukuze ibhekwe.
Kuhle kakhulu !!
Yinhle, ngiyayifuna nje, futhi ngicabanga ukuthi lokhu kuzoba ukuthenga kwami ​​okulandelayo.
Ngiyethemba ukuthi ngolunye usuku singashintsha uhlelo lwethu lwe-Android ngalena.
I-athikili enhle. Kungisizile ukufunda okwengeziwe ngeFirefox OS. Ngingathanda ukuyizama kepha angitholi noma iyiphi i-rom ye-HTC Bravo yami.
IPOSI ENKULU! Uma besingagcina izintandokazi bengizokwenza.
Ngalokhu i-Firefox OS ivele yangikholisa. Inakho engikudingayo, ngiyayithanda ukuthi yakhiwe kanjani, ivela eMozilla ... sekuvele kuthatha isikhathi ukuyikhiphela iMexico.
Kuyinjabulo ukufunda abantu abaningi kangaka abanokukhathazeka okufanayo. I-Google yiMicrosoft entsha! !
Ingabe kukhona uhlelo lokusebenza lokufuduka lusuka ku-Android luye kuFirefox noma ubufakazi benkomo efana nami?
Ubufakazi obuyisimungulu… Awu, funda ngokucophelela izikhathi ezimbalwa bese wenza konke kancane kancane xD Udinga nedivayisi ehambisanayo (ukulungiselela nokuhlanganisa kuthatha isikhathi eside) ukuyifaka kanye.
Isibuyekezo esihle kakhulu, ngiyabonga kakhulu ngokwabelana ngolwazi lwakho nathi
Ukubuyekezwa okuhle kakhulu kuyaziswa ngomsebenzi omuhle i-Auros eyithumele ukuhalalisela !!, Manje ngicabanga ukuthi le firefoxos inokunikela okuningi futhi iza ukulwa nohlelo olusha kuma-smartphones asezingeni eliphansi, kuthiwani uma ngidumele bekuthi anginayo i-whastapp ngicabanga ukuthi lolu hlelo lubaluleke kakhulu kulezi zinsuku, ngaphandle kokungabaza ukuthi abafana be-mozilla bazoqhubeka nokuthuthukisa le OS bese sibona lokho abake bakuphupha njenge-smartphone, ukubingelela abafana be-Ariki
UGerson Lazaro C kusho
Bengikade ngifuna isibuyekezo esihle sale foni izinsuku, futhi ikakhulukazi uhlelo lokusebenza, futhi ekugcineni ngiyitholile. Ngiyabonga kakhulu.
Phendula uGerson Lázaro C
Ukubuyekeza okuhle kakhulu. Kubonakala kuyisistimu enhle yabasebenzisi abasebenzisa kuphela i-smartphone yabo eyisisekelo. Kuyadabukisa ukuthi okwamanje ayinazo izinhlelo zokusebenza ezinjengeWhatsApp, ezingasiza kakhulu i-OS. Izikhathi eziningi ngibona ezinkundleni zokuxhumana imibuzo efana nale: "Iyiphi ifoni eshibhe kakhulu enayo i-WhatsApp?"
ngokuphambene nalokho, ngiyabonga ukuthi kukhona uhlelo lokusebenza lweselula olungenayo leyo crap ye-WhatsApp, inethiwekhi ye-xmpp evaliwe futhi elawulwayo.
Ngalokho, kunezinye izindlela ezingcono ezifana neXabber, Blem, Pidgin, Gajim, njll njll
Ngiyabonga kakhulu ngale ndatshana, into enhle engiyibonile 🙂
Ukubuyekezwa okuhle kakhulu uhlanganise wonke amaphuzu, ngizolinda ukuthi ifike eMexico ukuze ihlole i-terminal ngale OS, ngendlela engizame ngayo eyodwa nge-WebOS futhi ngiyayithanda.
I-lumia eshiwo ngenhla ayiyona eyaphansi, ibiza cishe ama-USD ayi-200 eMexico.
Ngabe imascot kaFirefox kwakungafanele ibe yipanda elibomvu?
Emfanekisweni ngibona impungushe ngokuphelele.
Hhayi ... angazi ukuthi ngithini ... Noma ngabe kufanele kube yipanda elibomvu, bengilokhu ngiyibona njengempungushe, futhi ngicabanga ukuthi manje impela iyimpungushe.
udokotela we-surubiologist kusho
Ukube bekuyipanda kusukela ekuqaleni, bekungeke yini kubizwe ngeFirepanda?
Ngaphandle kokuthi bengikusebenzise impela selokhu yaphuma, kanti ne-foz ibihlala ikhona.
Lapho ngifunda ukuphawula okunjengalokhu, into engcono kakhulu engingayenza ukukhuphukela phezulu kwesakhiwo ngigxumele ngaphandle kokucabanga kabili.
i-surubiologist: IFirefox (isilwane) ingeyomndeni wamaPandas, futhi yebo, kubukeka sengathi yimpungushe (mhlawumbe yingakho igama), kepha iyiPanda.
Ukubuyekeza kuphelele impela. Zimbalwa kuphela izinto ebezilahlekile nezithombe zomlawuli wenqubo.
Ngincoma ukuthi ubuyekeze inguqulo yesistimu, ukuze ubone ukuthi ithuthuke kanjani ekusebenzeni nasekubonakaleni.
Ngine-Alcatel One Touch Fire, eneFirefox 1.0.1, ngabe ikhona indlela oyaziyo yokuyibuyekeza ibe yiFirefox OS 1.1? Angikwazi ukuthola imininingwane eminingi ku-Google: /
Yebo, ukuvuselelwa okusemthethweni kufanele kufike ngaphambi kokuphela konyaka, kepha uma ufuna kakhulu ungakuhlanganisa kusuka endaweni yokugcina iMozilla B2G 😉
sawubona, unjani .. muhle. Nginocingo olufanayo, futhi luhle kakhulu .. olubi. isithombe se-M ye-pixel enepixelite futhi engakhiwanga kahle ye-M *, njalo uma ngiyivula .. uyazi ukuthi ungayisusa kanjani leyo M kokushisa? ,,
Yebo kunjalo, kepha inqubo iyisicefe ... Okokuqala kufanele usiphule idivayisi, lapho-ke kufanele uthole ifolda yohlelo lapho kugcinwa khona ukugqwayiza, bese uyifaka okusha. Ungalandela izinkombandlela ze-ZTE Pone, kufanele zisebenze.
Enye inketho ukuhlanganisa iFirefox OS ngqo yoMlilo, ngoba ayilethi, ku-Movistar animation 🙂
Nginenombolo yocingo efana neyakho nonyoko (hehehehe) kanti kuvela ukuthi izithombe engizithatha nekhamera azidluli. Ungangisiza?
Lokho kuyinto enzima kakhulu. Impela isoftware yakho, ungabheka ukuthi unezibuyekezo yini (entsha kunazo zonke ngu-1.0.1-01003). Uma kungenjalo, phinda ufake iSoftware. Ngikholwa ukuthi i-Alcatel ayinikezeli isoftware ngqo ekhasini layo, ngakho-ke okuwukuphela kwento esele esele ukuyenza ngesandla (ngaphandle kokuthi unokuxhumana okuhle ne-PC enamandla noma amancane, kuzothatha izinsuku).
Ngifuna ukwazi ukuthi ungayilanda yini i-line noma i-whatsapp? noma kuliqiniso ukuthi ungabeka uhlelo lwe-Android? njengoba?
Uhlelo olusebenzayo oluthembisa impela, sengizothenga iZTE Open ku-eBay ukuze ngibe yiphayona futhi ngibone ukuthi isebenza kanjani. Ngifuna ukucwilisa u-100%
UDiana Gabriela Rengifo kusho
Kepha-ke ... ungalanda i-whatsaap noma cha? Shiya ukungabaza!
Phendula u-Diana Gabriela Rengifo
Okwamanje asikho isicelo esisemthethweni se-WhatsApp, kukhona esingekho emthethweni esitolo esiseBeta. Isikhulu kufanele sifike ungakapheli unyaka.
NoLine, akazange aphawule ngalolu daba. Angicabangi ngokuzayo, mhlawumbe ngomunye unyaka noma emibili.
uyazi ukuthi uyisiphula kanjani le alcatel eyodwa touch model yefoni yomlilo noma ukuthi uyivula kanjani
Indlela yezimpande kufanele ifane neyeZTE Open, kepha angikazami. Kuyindaba yokusesha.
Manje, ukukhishwa, sekukhona amakhasi akhishwa yi-IMEI. Kunamadivayisi okufanele asetshenziselwe ukukwenza mahhala, angathengwa ku-inthanethi, njengeSigma Key.
uhlelo lokusebenza kusho
thatha i-mozila OS, kuze kube yilapho ucingo luyi-genenia, ukwehluka kwemibono kusiholela ekuqhubekeni nsuku zonke, isoftware yamahhala ivula izindlela ezintsha, ukuhlasela kwezingcingo zamawindi kuyahamba, ngicabanga ukuthi singaphinde siqalise i-catapult nge-mozila os, futhi sibone okuningi amawindi awe namuhla asongela izingcingo zawo.
Ungangitshela ukuthi ngabe umuntu othile lapha angavele asiphule i-alcatel eyodwa touch fire noma uma azi ukuthi angayidedela kanjani kusengaphambili futhi kushicilelwe okuhle kakhulu
I-athikili enhle kakhulu. Kepha mhlawumbe ukhohlwe eminye imininingwane. Ngine-onetouch ye-alcatel ene-firefox os 1.0. Okunye ukushiyeka ebengingalindele ukuthi kube ukungakwazi ukudlulisa amafayela nge-bluetooh, ngokusho kwebhulogi elisemthethweni le-firefox le nketho iphuma enguqulweni 1.1. Okunye okungahambi kahle ukungakwazi ukufaka izithombe nge-twitter naku-facebook. Ngiyethemba ukuthi isibuyekezo siyatholakala. Noma ucabanga ukuthi mhlawumbe lezi zinkinga ukwehluleka komakhalekhukhwini hhayi i-OS.
Ngiyathumela izithombe. Uma usho ezinye izinhlobo zamafayela (izingoma, amavidiyo, amadokhumenti), angikazami futhi ngicabanga ukuthi ngeke kwenziwe okwamanje. Angikhumbuli futhi ngikubona lokho ku-1.1 changelog.
Manje, ngifaka izithombe nge-Twitter ne-Facebook… bengingakwenza, kepha muva nje bengingafuni ukulayisha izithombe. Angazi ukuthi kungani.
Ngakho-ke, kufanele kube yizinkinga ze-OS. Sethemba ukuthi ukuvuselelwa kuzozixazulula.
Sengivele ngifuna ukubona i-firefox isebenza.
Kuhle, okuthunyelwe okuhle kakhulu futhi ngiyethemba ukuthi maduze bazokwakha ezinye izinhlelo zokusebenza zale OS entsha futhi ngaleyo ndlela labo bethu abazuze kakhulu njengabasebenzisi.
Sawubona, ngifuna ungisize. Nginenkinga nge-alcatel yami eyodwa touch firefox, angikwazi ukubeka umculo weringithoni nomyalezo. kukhona kuphela amathoni we-oooorriiiible futhi angifuni ukuwezwa
Okwamanje awukwazi. Ngiyethemba ngokuzayo kanjalo.
UGabriel Soler kusho
Kuhle kakhulu, ngiyabonga ngalesi sibuyekezo. ilusizo impela, manje sengizimisele ngokuyithenga futhi.
Phendula uGabriel Soler
jhon mende kusho
Ngicabanga ukuthi lonke ulwazi olunikeziwe lukhulu, bengizothenga i-ZTE engingathanda ukwazi ukuthi ngabe kulezi zinyanga kube khona ushintsho entuthukweni
Phendula ku-jhon mendez
Rogelio uriel kusho
Sawubona, ngisanda kuthenga i-Alcatel One Touch Fire, nginohlelo lwedatha olunqunyelwe futhi okuncane engikuzamile, ngibona ukuthi ukusetshenziswa kuphezulu kakhulu lapho upheqa i-Intanethi; Uyazi ukuthi ngingazikhawulela kanjani izinhlelo zokusebenza ekuxhumekeni ngokuzenzakalela kwi-Intanethi noma ngilinganisele eminye imisebenzi yemishini edinga ukusetshenziswa kwedatha ye-Intanethi?
Ngibonga kusengaphambili ...
Phendula uRogelio Uriel
ifike eChile: elaporte
Ngiyethemba ukuthi ngingayifaka esikhundleni se-nokia 701, ngoba i-Symbian Belle isivele ingaphezu kokushabalala, ngiyethemba ukuthi othile uzongisiza. okuthunyelwe okuhle kakhulu !!
Hawu, uthathe isikhathi sakho!
Ukubuyekeza okuhle kakhulu, siyakuhalalisela.
M @ rce kusho
Ngihlola ukuthengwa kwe-OT nge-FF OS, futhi lolu hlobo lombiko (oluhle ngakolunye uhlangothi) lusiza ukuba nezisekelo ngesikhathi sokuphothula ukutholwa.
Siyakuhalalisela ngomsebenzi futhi ngiyabonga ngolwazi.
Ukubingelela okuvela eMontevideo.
Phendula ku-M @ rce
Lokhu kubuyekezwa kwenziwe ngenguqulo 1.0 yeFirefoxOS, njengamanje i-Alcatel ingafakwa ku-1.3, ithuthuke kakhulu, kepha kuningi ekusebenzeni nasezinketho, zombili ngokuya ngopopayi, ukuthinta, njll.
Uma uthanda okufunde eposini, akutshele ukuthi namuhla kungcono kakhulu 🙂
Ukubingelela nokubonga ngamazwana.
I-PS: Ungaba nentshisekelo ezithombeni esizishicilela lapha zamakhompyutha aneFirefoxOS: https://blog.desdelinux.net/release-party-con-firefox-firefoxos-y-ubuntu-de-invitados/
Ngizamile ku-Nexus 4 yami ezinyangeni ezimbalwa ezedlule naku-Xperia neo V yami nokusho ukuthi impela eyokuqala ingcono kuneyesibili. Ngaphezu kwalokho, ngiyithande kakhulu ngoba emahoreni ambalwa bengine-smartphone enazo zonke izinhlelo zokusebenza eziyisisekelo. Kepha noma kunjalo, ngemuva kwezinsuku ezimbalwa ngabona ... ukuthi i-android isebenza kahle kanjani, kumphathi wami okwamanje ku-ffOS njengoba kwenzeka ku-Ubuntu touch ukuthi ngiyizamile kaningana futhi njengoba kubuhlungu kufanele ngibuyele kuyo i-android. Kepha hheyi, ngizoqhubeka nokuyihlola ngemuva kwenguqulo ngize ngibone okuthile okuvuthiwe ngokwengeziwe.
Yeka ukubuyekeza okuhle futhi ngikulindele ukuthi kufike lapha e-Argentina, ukuze ngizame
Ukubuyekeza okuhle kakhulu, siyakuhalalisela, nginombuzo, unakho ukukhanya okuholwa okukhombisa ukuthi izaziso zifika nini njengama-smartphones athile?
SteeFaaniia ShaaUx kusho
Cha angisakwazi ukugcina isithombe esipheqululini ngaphandle kokukhipha inkumbulo. Ngicela ungisize ...
Phendula ku-SteeFaaniia ShaaUx
umartin cartaya kusho
Nginenkinga nge-zte yami evinjiwe futhi engaphumi noma evumela izingcingo ukuthi zingene, ngiyibeke kwimodi yendiza bese ngiyayisusa kepha iphutha lihlala lisho ukuthi linokuphikisana nocingo olulindile
Phendula kumartin cartaya
Ungangitshela izinyathelo zokubona inqama ku-firefox os yami ??? kungumlilo we-alcatel c